डा. केसीको माग विपरीत विधेयक पारित गर्ने दौडमा रञ्जु झा, प्रधानमन्त्रीले बोलाए बैठक
साउन २७, २०७४ शुक्रवार १६:२८:०० प्रकाशित
काठमाडौं– महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेलेर पास गर्ने योजना तत्कालका लागि विफल भएको छ । समितिको शुक्रबार बिहान बस्ने भनिएको बैठकमा जसरी भए पनि विधेयक पास गर्न सभापति झा लगायतका सांसदले योजना बनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन हुने गरी विधेयकमा छलफल गर्न उच्चस्तरीय बैठक बोलाएपछि समितिको बैठक स्थगित गर्नुपरेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरोकारवालाहरुलाई बिहान ११ बजे छलफलका लागि बोलाएका छन्। समितिको बैठक दिउँसो दुई बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ । सभापति झा काठमाडौं उपत्यकामा सम्बन्धनको खेलमा रहेका ५ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने गरी तयार पारिएको विधेयक पारित गर्न दौडमा लागेकी छिन् ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा र माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइराला लगायतले सभापति झाको बिहीबारै विधेयक पारित गर्ने योजना विफल बनाइदिएका थिए ।
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग विपरीत विधेयक पास हुने संकेत देखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सरोकारवालालाई छलफलका लागि बोलाएको बुझिएको छ । एक समूह सम्बन्धन दिन सकिने आशयलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा लागेपछि विधेयक विवादमा छ ।
आज समितिले आज विधेयक संसदमा नपठाए थप एक साता कुनुपर्नेछ । आजदेखि एक साताका लागि संसद स्थगित हुन लागेको छ । माथेमा कार्यदलको मर्म र आफूले दिएका सुझाव समेटेर तत्काल राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने भन्दै डा. केसी १९ दिनदेखि अनशनमा छन्। यो माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने उनको अडान छ ।